Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Hiverina ny sidina finday amin'ny sidina Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mandritra ny fizahana finday, ny kaody QR amin'ireo taratasy fanamarinana taratasy dia azo jerena ankehitriny ary arahana haingana sy mora.
Lufthansa dia mamerina ny fizahana finday amin'ny sidina avy any amin'ny faritra tsy atahorana.
Ireo mpitsangatsangana indray dia afaka manana ny pasipaorony hivoaka mivantana amin'ny finday avo lenta.
Miaraka amin'ny pasipaoro niomerika dia tsy misy antontan-taratasy fanampiny ilaina amin'ny kaontera fisoratana anarana.
Lufthansa dia manolotra indray ny mpandeha amin'ny fomba fizahana fanamarinana mety kokoa. Amin'ny sidina 2000 isan-kerinandro avy any amin'ny faritra tsy misy risika amin'ny faritr'i Schengen (avy any Espana, Italia na Suède ankehitriny, ohatra) mankany Alemana, ny mpandeha dia afaka mamoaka mivantana ny pasipaorony amin'ny finday avo lenta rehefa mizaha.
Natao izany tamin'ny alàlan'ny fanamarinana mandeha ho azy sy nomerika ireo taratasy fanamarinana vaksinin'ny EU, izay manaporofo ny fiarovana ny vaksiny feno, ary ny valin'ny fitsapana COVID-19 avy amin'ny laboratoara Centogene.
Mandritra ny fizahana finday, ny kaody QR amin'ireo taratasy fanamarinana taratasy dia azo jerena ankehitriny ary arahana haingana sy mora. Midika izany fa afaka avoaka ny pasiteran'ny nomerika ary tsy ilaina intsony ny fanamarinana antontan-taratasy fanampiny eo amin'ny kaontera fisoratana anarana ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Fa toy izany koa no mihatra amin'ny maro hafa Lufthansa sidina: izay rehetra manahy fa tsy manana mari-pankasitrahana marina momba ny dia izy ireo dia afaka manamarina azy ireo a Lufthansa Service Center hatramin'ny 72 ora alohan'ny fiaingany. Ireo dia mety ho porofom-pitsapana, aretina COVID-19 tafavoaka velona. Ny fanamafisana ny fisoratana anarana nomerika dia azo zahana amin'ity fomba ity ihany koa. Noho ny vahaolana nomerika vaovao, mandeha ho azy izao ny fizahana ary noho izany dia haingana kokoa, ary koa ao amin'ny Ivotoerana Serivisy.
Manoro hevitra ireo vahininy ny zotram-pitaterana an'habakabaka fa ankoatry ny porofo dizitaly, ny mari-pankasitrahana vita pirinty dia mbola tsy maintsy entina mandritra ny dia mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka.